Vovoka metaly, perôloratà sôdiôma, sôleôma sôdiôma - YANXA
YANXA (HK) INTERNATIONAL INDUSTRIAL CO., LTD. (izay antsoina hoe YANXA) dia iray amin'ireo mpamatsy tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny sehatry ny akora manokana sy ny akora simika pyrotechnic any Shina. Nanomboka tamin'ny sampana orinasa kely vao nanomboka ny taona 2008, YANXA dia entanin'ny firehetam-po amin'ny fampiroboroboana ny tsena any ivelany amin'ny faritra misy ifandraisany indostrian'ny pyrotechnic ary fizarana fampahalalana momba ny indostria amin'ireo mpitsabo mifandraika amin'izany.
2,4-Dinitrotoluene, teboka fanamafisana avo
Vovoka manezioma atoma
Polybutadiene voafarana Hydroxyl
Vovon-tsolika alim-bolan'ny alimika manezioma matevina
Mifandraisa aminay raha mila rakikira ohatra maromaro
Ny orinasa dia nitombo lasa Premier ISO9001: 2008 mpanamboatra voamarina amin'ny kalitao avo, vokatra mahomby.
Fampiasana roa tonta sy antontan-taratasy fangatahana lisansa fanondranana teknolojia
1. Kopian'ny fifanarahana na fifanarahana; 2. Famaritana ara-teknika an'ireo zavatra sy teknolojia fampiasàna roa; 3. Taratasy fanamarinana sy fampiasa amin'ny faran'ny mpampiasa (ao anatin'izany ny fandikana sinoa), araka ny fepetra takian'ny Minisiteran'ny Varotra, ny firenena sasany dia mila manome fanamarinana roa. Raha fo ...
Raha ampitahaina amin'ny vovoka manezioma nentim-paharazana (fikosoham-bary, tany) ny vovoka manezioma atômika novokarin'i Tangshan Weihao manezioma vovoka Co., Ltd dia manana toetra toy izany: fahadiovana avo, votoatin'ny magôniôma mavitrika, hetsika avo lenta, hakitroky hita miharihary, fisiranana be, avo stabili ...
Fampiharana Ddi amin'ny lamba lamba
Diisocyanate (DDI) dia diisocyanate aliphatic tsy manam-paharoa miaraka amin'ny hazondamosin'ny asidra karbôna 36 dimbone. Ny firafitra dia manome DDI fahalalahana sy firaiketam-po tsara kokoa noho ny isocyanates aliphatic hafa. Ny DDI dia manana toetran'ny poizina ambany, tsy misy mavo, mihalefaka amin'ny ankamaroan'ny solvents organika, marefo amin'ny rano ambany a ...